फागुनमै लगाउन पाउलान् त नेपालीले भारत बायोटेकको ‘कोभ्याक्सिन?’
बिहीबार, असोज ८, २०७७ लाइभ
गजेन्द्र बाेहरा काठमाडौं - बुधबार, भदौ १७, २०७७
छिमेकी भारतकै ठूलो औषधी उत्पादक कम्पनी ‘भारत बायोटेक’ ले उत्पादन गरेको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन नेपालमा परीक्षणको तयारी थालिएको छ।
त्यसका लागि नेपालसँग छलफल गरिरहेको बायोटेकले जनाएको छ।
बायोटेकले तयार गरेको कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन अहिले दोस्रो चरणको परीक्षण क्रममा छ।
आगामी अक्टोबर अन्त्यतिर दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएपछि तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि उसले नेपालसँग प्रस्ताव गरेको हो।
यद्यपि, सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि भ्याक्सिनलाई नेपालमा परीक्षणको अनुमति दिएको छैन।
यसअघि नै रुस, चीन र भारतकै सेरम इन्स्टिच्युटले तयार गरेका भ्याक्सिन परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरिसकेका छन्।
यीसँगै भारत बायोटेकले पनि आफ्नो भ्याक्सिन परीक्षण गर्न प्रस्ताव गरेको हो।
भारत बायोटेकले बनाएको भ्याक्सिन के हो?
भारत बायोटेक विश्वकै प्रमुखमध्यको एक औषधी उत्पादक कम्पनी हो।
अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डा. कृष्ण एला र उनकी पत्नी सुचित्राले सन् १९९६ मा स्थापना गरेको यो कम्पनीको मुख्यालय हैदराबादमा छ।
गत अप्रिलमा बायोटेकले अमेरिकी कम्पनी ‘फ्लुजेन’ र विस्कन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालयको सहयोगमा कोरोनाविरुद्ध भ्याक्सिन बनाउने घोषणा गरेको थियो।
भारतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद तथा नेसनल इन्स्टिच्युट अफ भाइरोलोजीको प्रत्यक्ष सहभागितामा तयार पारिएको यो भ्याक्सिनलाई ‘कोभ्याक्सिन’ नाम दिइएको छ।
यो भ्याक्सिनलाई उसले भारतकै पहिलो ‘स्वदेशी कोरोना भ्याक्सिन’ भनेको छ।
गत जुलाइमै परिषदले बायोटेकलाई अगस्ट १५ मा उक्त भ्याक्सिन सार्वजनिक गर्न तयार हुनू भनेर पत्र पठाएको थियो। तर, त्यसको परीक्षण नसकिएका कारण त्यो दिन भ्याक्सिन सार्वजनिक गरिएन।
अगस्ट १५ भारतीय स्वतन्त्रता दिवसका दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘यही वर्षभित्र कोरोनाविरुद्धका तीनवटा स्वदेशी भ्याक्सिन बजारमा आइसक्ने’ घोषणा गरे। ती तीनमध्ये बायोटेकले बनाएको यो कोभ्याक्सिन पनि एक हो।
परीक्षण सफल भइदिएको भए त्यही स्वतन्त्रता दिवसकै दिन प्रधामन्त्रीले लालकिल्लाबाट त्यो भ्याक्सिन विमोचन गर्ने योजना थियो।
यो भ्याक्सिन अहिले भारतका विभिन्न १२ अस्पतालमा परीक्षण भइरहेको छ।
यो भ्याक्सिन नेपालमा आउँछ?
सरकारले अनुमति दिए परीक्षणका लागि पनि नेपालमा आउँछ, अनि फेब्रुअरीपछि सम्भवतः बजारमै पाइने छ।
तेस्रो चरणको परीक्षणपछि सम्भवतः फेब्रुअरी (फागुन दोस्रो साता) भित्र बायोटेकले यो भ्याक्सिनको व्यावसायिक उत्पादन नै सुरु गर्नेछ।
‘हामीले डिसेम्बरभित्र तेस्रो चरणको मानव परीक्षण सक्नेछौं। त्यसपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनसँग अनुमति र अरू कानुनी प्रक्रियाका लागि एक महिनाजति लाग्नेछ,’ भारत बायोटेकका नेपाली बजार व्यवस्थापन हेरिरहेका सुरेन्द्र नायरले आयोमेलसँग भने, ‘त्यसपछि यो औषधी बजारमा आउने छ।’
उनका अनुसार तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि बायोटेकले नेपालसँग पनि अनुमति मागिरहेको छ।
नेपालले अनुमति दिए यहाँका कोरोना संक्रमितले पनि यो औषधी स्वेच्छाले परीक्षणका लागि लगाउन पाउनेछन्।
त्यसका लागि मन्त्रालयसँग छलफल चलिरहेको नायरले बताए।
‘सरकारले अनुमति दिए यो खोप नेपालमा पनि परीक्षण हुनेछ,’ नायरले भने, ‘हामी त्यसका लागि इच्छुक छौं र सरकारसँग कुराकानी भइरहेको छ।’
कम्पनीले पहिलो चरणमा भारतका विभिन्न क्षेत्र, जाति र समुदायका करिब १ हजार मानिसमा यो परीक्षण गरेको थियो।
अहिले दोस्रो चरणको परीक्षण चलिरहेको छ र, नोभेम्बर अन्त्यतिर यो दोस्रो चरण पनि पूरा हुनेछ। त्यसपछि तेस्रो चरणको परीक्षण हुनेछ।
नेपाल के भन्छ?
नेपालले अहिलेसम्म कसैलाई पनि परीक्षणको अनुमति दिएको छैन।
चीनले नेपालमा कामका लागि बसेका आफ्ना ५ हजार नागरिकलाई आफूले बनाएको भ्याक्सिन परीक्षण गर्न चाहन्छ। होङ्सी शिवम् सिमेन्टमा कार्यरत करिब हजार र देशभरका अन्य चिनियाँले सुरुमा त्यो परीक्षणको भ्याक्सिन पाउनेछन्।
त्यस्तै रुसले पनि आफ्नो भ्याक्सिन यहाँ परीक्षण गर्न चाहिरहेको छ।
अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले भातको सेरम इन्स्टिच्युटसँग मिलेर तयार गरेको भ्याक्सिन नेपालमा परीक्षण गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत् प्रस्ताव गरिसकेको छ।
‘तर, हामीले अझै त्यसबारे केही निर्णय गरिसकेका छैनौं,’ नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्यसचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले आयोमेलसँग भने, ‘हामीले विभिन्न चरणका छलफल गरेका छौं। विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेका छौं। सबैले परीक्षण आवश्यक छ भन्ने सुझाव दिनुभएको छ।’
उनका अनुसार सोही सुझावबमोजिम परिषदले परीक्षणका सबै खाका बनाएर सरकारलाई बुझाउने छ। र, खोप परीक्षणका लागि सरकारले अनुमति दिनेछ।
त्यसको निरीक्षण, रेखदेख र भ्याक्सिनबारे थप अनुसन्धन भने परिषदले गर्नेछ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले परीक्षणको सबै चाँजोपाँजो मिलाउन स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदलाई नै जिम्मा दिएको छ।
‘चीन, रुस’ हरूले बनाएका कोरोना खोप परीक्षण नेपालमा किन?
रेमडिसिभिरको आश : परीक्षण बल्ल तेस्रो चरणमा, हल्लैले तस्करी व्यापक
प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ १७, २०७७
तिनाउ नदीले घर बगायो, तीन परिवार सारियो
नदी किनारामा रहेको प्रेमकुमारी खाम्चाको सिमेन्टका ब्लकले बनाएको ४ कोठे घर नदीले बगाएको हो। घरमा रहेको लत्ता कपडा अन्य सामान समेत बगाए भएपनि मानवीय क्षति भने भएको छैन्। आयोमेल संवाददाता
भक्त्तपुरका दुई होल्डिङ सेन्टर बन्द
सेन्टरमा ग्रीन भिलेज हाउजिङ प्रालि र निक भुजीँ हाउजिङ प्रालिले उपलब्ध गराएको खाद्य सामग्रीबाट विदेशबाट फर्किएका १५ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई नेपाली सेनाको टोलीले खाना पकाउने, खुवाउनेलगायत व्यवस्था गरेको थियो। आयोमेल संवाददाता
काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै संक्रमण पुष्टि, उपत्यकाभर ६ जनाको मृत्यु
सबैभन्दा धेरै काठमाडौंमा ६०९, भक्तपुरमा ५१ र ललितपुरमा ९५ जना गरी ७५५ जनामा थप संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यस्तै मृत्यु भएका १७ जना संक्रमितमध्ये ६ जना काठमाडौं उपत्यकाभित्रका छन्। आयोमेल संवाददाता
‘सिंहदरबार’ लाई भक्तपुरकाे प्रश्न : विकासजति काठमाडौंलाई मात्रै? सुनिल प्रजापति
लोडसेडिङलाई इतिहास बनाइदिएँ कुलमान घिसिङ
तेजिला नवीनको ‘करिअर ट्रयाजिडी’ सुन्दर खनाल